November 13, 2020 - SANTHITSA
“ဘယ်သူ့မှတောင် မေးစရာ မလိုတော့တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း အတွက် လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀၀)”
“ဘယ်သူ့မှတောင် မေးစရာ မလိုတော့တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း အတွက် လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀၀)” မိန်းခလေးမှန်ရင် သိမ်းထားပါ… 1. မိတ်ကပ် လိမ်းခြယ်မယ်ဆို အောက်ခံ အသားအရည်ကို အရင် ကောင်းအောင် လုပ်ပါ/ 2. မိတ်ကပ်ကို အိမ်မှာနေရင် မလိမ်းပါနဲ့/ 3. မိတ်ကပ်ကို အပြင်သွားပြီး ပြန်လာတာနဲ့ တစ်ခါထဲ ဖျက်ပါ/ 4. မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ နေ့တွေမှာ မျက်နှာကို သေချာ သန့်စင်ပါ ၊မိတ်ကပ်က မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာ တခုသုံးယုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး/ 5. မိတ်ကပ် ဖျက်မယ်ဆို မိတ်ကပ် remover သုံးပြီး သန့်စင်ပြီးမှ မျက်နှာသစ်ပါ/ 6. မိတ်ကပ် remover ကို …
အရှုံးတွေထဲကနေ အကြိမ်ကြိမ်ရုန်းထရင်း သမ္မတဖြစ်ဖို့ လမ်းစရှာခဲ့သူ
အရှုံးတွေထဲကနေ အကြိမ်ကြိမ်ရုန်းထရင်း သမ္မတဖြစ်ဖို့ လမ်းစရှာခဲ့သူ သမ္မတတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး ။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ သမ္မတဖြစ်ဖို့ သာပြီးတော့တောင် မလွယ်ပါဘူး ။ နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူ အသိုင်းအဝိုင်းကတော့ နှောင်းခေတ် အမေရိကန်သမ္မတွေကို မော်ဒန်ခေတ်ရဲ့ စကြာဝတေးတွေလို့တောင် တင်စားကြပါတယ် ။ ဒီလို တင်စားတာကလည်း လွန်ဖွယ်မရှိပါဘူး ။ ကမ္ဘာ့ စူပါ ပါဝါ နိုင်ငံ ဖြစ်နေလို့ပါ ။ အခုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ အကြောင်းဟာ အမေရိကန်တစ်ခွင်သာမက ကမ္ဘာ့စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု အခံရဆုံး ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဘာလို့ဆို သူဟာ ကမ္ဘာ့စူပါပါဝါနိုင်ငံကြီးကို ခေါင်းခံ အုပ်ချုပ်တော့မယ့် သူမို့ပါ ။ နောက်ပြီးသူ့ကိုအပ်နှင်းထားတဲ့ အမြင့်ဆုံးအာဏာတွေနဲ့ …
သွေးထွက်အောင် မှန်နေတဲ့ နိမိတ်တဘောင်နှင့် ယနေ့မြန်မာပြည်
သွေးထွက်အောင် မှန်နေတဲ့ နိမိတ်တဘောင်နှင့် ယနေ့မြန်မာပြည် “ကုန်းဘောင်ခေတ်ကတည်းက ပေါ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် တဘောင်တစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်” (၁) ဟင်္သာမင်း အင်းကို ဆင်းမည်။ (၂) ထိုဟင်္သာကို မုဆိုး လေးနဲ့ ခွင်းမည်။ (၃) မုဆိုးကို ထီးရိုးရိုက်လိမ့်မည်။(၄) ထီးရိုးကို မိုးကြိုး ပစ်လိမ့်မည်။ (၅) သံခမောက်ဆောင်း လေးယောက်ပေါ်လိမ့်မည်။ (၆) ဧရာဝတီ ခမ်းလိမ့်မည်။ (၇) လက်ပံလည်း ရှားလိမ့်မည်။ (၈) ကြက်မ တွန်လို့ မိုးလင်းမည်။ (၉) ဗုဒ္ဓရာဇာကိန်းနဲ့အညီ နန်းသိမ်းလိမ့် (၁၀) ဗုဒ္ဓရာဇာသာသနာပြု မင်းကောင်းမင်းမြတ် ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်ကြီး စည်ကားသာယာ ဝပြောလိမ့်မည်။ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များ ။ …
ဖောက်ပြန်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပုံစံများ…
ဖောက်ပြန်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပုံစံများ… ဖောက်ပြန် ဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေ တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပုံစံတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ ( ၁ ) ပစ္စည်းဥစ္စာမက်တဲ့ မိန်းကလေး” ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးးက ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ် အရမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့ သူတွေပေါ့။ သူမဟာ ဟိုဟာဝယ်ဖို့၊ ဒီဟာဝယ်ပေးဖို့ အမြဲသင့်ကို ပူဆာနေတော့မှာပါ …။ သင်ဝယ်ပေးဖို့ ငြင်းလိုက်ရင်လည်း သင်သူ့ကို မချစ်ဘူးလို့ သူမထင်မှာပါ။ သင်ဝယ်ပေး နိုင်တုန်းတော့ သင့်ကိုချစ်နိုင်ပေမယ့် သင်မဝယ်ပေး နိုင်တော့တဲ့ တစ်နေ့မှာ …. တခြားအကောင်ကြီးကြီး တစ်ယောက်ကို သူမအချစ်တွေ သိမ်းကျုံး ပေးလိုက်မယ့်မိန်းမ မျိုးပေါ့ …။ ( ၂ ) …